Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay Kuxigeenka Q.M – Gedo Times
3rd February 2016 admin Wararka Maanta 0
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa soo gaaray Ku xigeenka dhinaca Siyaasadda Xoghayaha Guud ee QM,iyadoo uu kulan la qaatay Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya oo uu ugu horeeyo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo qaabilay mas’uulkaasi ayaa ka wada hadlay arrimo kale duwan oo la xiriira xaaladda dalka iyadoo madaxweynaha uu sharaxaad ka siiyay horumarka Soomaaliya.
Kulanka oo ka dhacay Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ayaa looga hadlay Arrimo badan oo quseya Marxaladda Soomaaliya iyo sidii Qaramada Midoobay ay u sii wadi laheyd Taageerada Soomaaliya ay siiso.
Dhinaca kale guddoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyaga mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa la kulmay Ku xigeenka dhinaca Siyaasadda Xoghayaha Guud ee QM, iyagoo ka wada hadlay arrimo kale duwan oo la xiriirta siyaasadda dalka taasi oo uu bogaadiyay sarkaalkaasi ka socday Umadaha Midoobay.
Dhanka kale Kuxigeenka Ban ki-moon ayaa Xarunta Xalane kulan kula leh Saraakiil ka tirsan QM iyo AMISOM,iyadoo ay Warbaahintu banaanka ka joogto.
TOP News: Maamulka Baardheere oo ka warbixiyay Hawlgallo ay Amniga ku sugayeen oo Maalmihii lasoo dhaafay ay kawadeen Gudaha Degmadaasi.